Wasiir ku xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya.
Uhuru Kenyatta oo lagula taliyay inuu garab weydiisto Farmaajo
Cunug yar oo meel buuro hoostood ah lagu aasay 78,000 oo sano ka hor ayaa la ogaaday inuu yahay qofkii ugu horreeyay ee inta la ogyahay lagu aaso qaaradda Afrika.
Su'aalo ku gedaaman khilaafka cusub ee diblumaasiyadeed ee soo kala dhexgalay labada dal iyo jawaabahooda.
Gantaalka oo dheererkiisu yahay 30 mitir ayaa haatan dunida ku dul wareegaya 90 daqiiqadood ee kasta xawaarahaas oo aad u sarreeya.
"Arrintani ma ahan wax la yaab leh, waayo waxaan ahay qof Alle rumaysan," ayuu yiri.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa isasoo tarayay warar la isla dhex marayay oo ku saabsan in saraakiil ka tirsan militariga dalka Nigeria ay ku howlan yihiin sidii ay u afgambin lahaayeen madaxweyne Muhammadu Buhari, arrintaas ayaana abuurtay cabsi xoog leh.
Cinwaankii Kangana Ranaut ayaa loo xiray sababo la xiriira waxyaabo ay soo dhigtay oo la sheegay in ay qalalaaso kicinayaan.
27 arday oo ka hartay arday laga afduubtay Nigeria oo la sii daayay
Waxay ka mid ahaayeen 39 arday oo ay bishii March burcad hubeysan ka kaxeysteen qolalka ay ka degganaayeen Iskuulka. Tiro ka mid ah ardaysaasi, ayaa la sii daayay bishii hore.
TOOS Heshiis 10-qodob ah oo ay gaareen Ra'iisal wasaare Rooble iyo Midowga Musharaxiinta
Tabinta Tooska ah.
Benjamin Netanyahu: Ninkii Kumaandooska ee noqday ra'iisal wasaaraha Israa'iil
Dhageyso, Dhageyso: Madaxweyne Farmaajo ma haystaa baasaboorka Canada?, Muddada 4,38
Villa Soomaaliya ayaa beenisay in madaxweynaha uu haysto baasaboorka Canada, iyo in uu madax ka soo noqday jaaliyadda Soomaalida ee Buffalo.
Dhageyso, Sharma Boy: "Fankayga waa midka dhallinyarada, midkii hore na waa laga tagay", Muddada 13,29
Sharmo Boy oo ah heesaa da'yar isla markaana dhawan ku soo caan baxay heesaha Raabka ayaa BBC-da uga warramay fankiisa. "hadal oo dhan ayaa mrti ah, marka laga reebo aflagaado".
Muuqaal, Ninka Soomaaliga ah ee loo faquuqo timihiisa awgood, Muddada 11,10
Illaa 10-kii sano ee la soo dhaafay ayuu tinta deysanayay, balse lixdii sano ee ugu dambeeyay maqas laguma taaban sida uu BBC u sheegay.
Dhageyso, Dhakhtar Soomaali ah oo sharaxaya tallaalka AstraZeneca, Muddada 3,44
Waxaa Soomaaliya ka bilowday qaybtii ugu horreeysay ee barnaamijka talaalka AstraZeneca, oo shalay gaaray magaalada Muqdisho.
Lammaanahan ayaa sanadkii 2000 asaasay hay'adda samofalka ee Bill iyo Melinda Gates Foundation ee la dagaalanka saboolnimada, cudurada iyo sinnaan la'aanta adduunka.
4 Maajo 2021
Madxafka oo lagu soo bandhigay hub iyo gawaari dagaal, wuxuu ka careysiiyay Armenia.
Kulamada habeenkii la cayaaro ee Premier League ayaa inta badan ku soo beegma xilliga affurka.
Man City oo marki afaraad ku guuleysatay koobka Carabao Cup
Manchester City ayaa afar sana oo xiriir ah ku guuleysatay koobka Carabao Cup iyo Tottenham oo markale ku guul dareysatay iney hanato koobka.
Joog kabo ah oo la kala siistay $1.8 milyan
"Iibka kabahan ayaa ka dhigan in ay noqonayaan kabahii ugu horeeyay oo qiimahooda uu kor u dhaafo hal milyan oo doolar" ayaa laga soo xigtay Rugta Xaraashka ee Sotheby's.
27 Abriil 2021
Maqaayadaha caanaha lagu iibiyo ee caanka ka ah Rwanda ayaa muujinaya sida ay lo'da iyo caanaha muhiim ugu yihiin dhaqanka dalkaas.
Gobolkan ku yaalla dalka Hindiya oo shacabkiisu ba badan yihiin guud ahaan dadka Brazil ayaa dhibaato adag kala kulmaya sidii uu u xakameyn lahaa cudurka Covid-19.
Magaalada 'in la neefsadaa' ay qaaliga noqotay
"'Ogsajiin, ogasajiin, fadlan ogsajiin ma iigu deeqi kartaa'
25 Abriil 2021
Meydadkii faraaciinta ayaa dhawaan laga saaray goobtii ay yaalleen waxaana la geeyay madxaf cusub.
Dad badan ayaa guryaha ku isticmaala Mashiinkan oradka maadaama dadku guryo joog noqdeen waayahaan sababo la xiriira fayraska karona
Xawayaan internet-ka ka jaray magaalo Canada ku taal
Adeegga internet-ka oo 12 saacadood ka go'anaa magaalo ku gaal gobolka British Colombia ee dalka Canada, ayaa lagu eedeeyey xawayaanka loo yaqaan Beavers-ka.
Adeeggan ayaa leh qeybo toos ah oo ay dadku qaab maqal ah ku wada sheekeysan karaan.
Listen Next, Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 7 Maajo 2021, Muddada 29,00
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 6 Maajo 2021, Muddada 1,00,00
Dhageyso, Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 6 Maajo 2021, Muddada 30,30
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 6 Maajo 2021, Muddada 29,00
Khudbadda madaxweynaha u ka horjeediyay Golaha Shacabka ayaa ahayd mid aad loo sugayay maadama muddo kordhiintii goluhu sameeyay ay rabshado ka dhasheen
In ka badan 100,000 oo qof ayaa guryahooda ka barakacay kaddib markii ay rabshado ka dhaceen Muqdisho, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
"Maxbuuskii ugu waqtiga dheeraa" Ameerika ayaa dhawaan ka soo baxay xabsiga isagoo nin xora ah. Joe Ligon ayaa waxa uu BBCda qeybta dibadaha la hadasha kala hadlay sida uu xabsiga ugu soo qaatay ku dhawaad 70 sanadood, sababta uu mudada dheer u sugayay xorriyaddiisa, iyo qaabka uu doonayo inuu ku qaato maalmaha nolosha uga harsan.
Mareykanka ayaa muddo sannado ah hoggaanka u hayay dadaal lagu doonayay in lagu soo xiro ama lagu dilo madaxda kooxo argagixiso ah ama madaxweyneyaal dalalkooda laga afgambiyay oo loo heysto dambiyo kala duwan.
Narendra Modi ayaa maanta khudbad u jeedinaya shacabka gobolka Kerala oo ay dhawaan doorasho heer goboleed ah ka dhaceyso, laakiin qaar ka mid ah dadka ayaa dib usoo gocday hadal ay qoonsadeen oo uu Ra'iisul Wasaaruhu yidhi xilligii ay ku beegneyd doorashadii ugu dambeysay ee 2016-kii.
Ra'isal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ciidamada ammaanka ee dowlada Federaalka Soomaaliya faray inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka.
Wareysi uu BBC-da siiyay ayuu majaajiliistahan uga sheekeeyay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay noloshii miyiga.
Xiisad ayaa ka taagan magaalada Muqdisho kaddib markii khilaafkii siyaasadeed ee ka taagnaa arrimaha doorashada uu isu baddalay gacan ka hadal.
Wasiirka wadaadka ahaan jirey ee loo haysto amaan uu u jeediyay Usama Bin Ladin
Hadaladan ayaa qabsaday baraha bulshada, iyada oo dadka ay madaxweyne Maxamadu Buhari ugu baaqeen in uu shaqada ka eryo.